ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၄-၃-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၄-၃-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- လျှပ်စစ်မီးကိစ္စ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ဆရာတော်ကို ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့သူများ ဖမ်းဆီးခံရ click
- အာဏာပိုင်တွေရဲ့ နှိမ်နင်းမှု CEDAW ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်း click
- ပုံနှိပ်ဥပဒေမူကြမ်းကို မြန်မာစာနယ်ဇင်းကောင်စီ ကန့်ကွက် click
- မြန်မာ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေ ထုတ်ခွင့်ရ click
- ဘာသာရေးတင်းမာမှုကြောင့် လှိုင်သာယာမှာ ဒေသန္တရအမိန့် ထုတ်ပြန် click
- ဘင်္ဂလားရာက် မြန်မာတွေ စိုးရိမ်နေ click
- ဆန္ဒပြ မြန်မာလုပ်သားများ အရိုက်ခံရမှု ဂျော်ဒန်ရဲ စစ်ဆေး click
- ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ ဆန္ဒပြအလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တာဝန်ရှိသူများ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း click
- ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်သူများအဖွဲ့ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းသူ များလာ click
- ကချင်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ မကြာခင် ပြန်စမည် click
- ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု သဘောတရားဆိုတာ ဘာလဲ (ဆောင်းပါး) click
- NLD(LA) ဥက္ကဌနဲ့ ၈၈ ခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံ click
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ဖင်လန်မှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ ဓာတ်ပုံများ click
- သမဒဂျီး ဖင်လန်သွားခြင်း click
- ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု ရုံးတွေ အကဲဖြတ်မယ် click
- ဟံသာဝတီ ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း မင်းရဲကျော်စွာလမ်းကို ယာယီပြောင်းရွှေ့ click
- လင်းလက်ကြယ်စင် - ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို ဘယ်လို စလုပ်နိုင်သလဲ၊ ပရဟိတလုပ်တဲ့အတွက် ရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်း (အသံ) click
- ကျန်းမာရေး ဒီမိုကရေစီ (ဆောင်းပါး) click
- ၀ဋ်ကောင် (ကဗျာ) click
- ဆီးရီးယား သမ္မတ ရာထူးစွန့်ဖို့ မစဉ်းစား click
- နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကယ်ရီ ဆော်ဒီအာရေဗျ ရောက်ရှိ click
- လေကြောင်းစစ်ကြောင့် အာဖဂန် ကလေးငယ် သေဆုံး click
- ကရာချိမှာ ကားဗုံး ပေါက် click
- ပါကစ္စတန် ကားဗုံးကွဲမှု ၄၅ ဦး သေဆုံး click
- ကင်ညာ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ စ click
- ဘာသာရေးအခြေခံတဲ့ အစိုးရဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှု click
- ဖိလစ်ပိုင်လက်နက်ကိုင်တွေ မလေးရှားရဲကို တိုက်ခိုက် click
- ဆင်စွယ် ရောင်းဝယ်မှု ပိတ်ပင်ဖို့ ထိုင်း ဆုံးဖြတ် click
- နယူးယောက်မြို့ သစ်ခွပန်းပြပွဲ (ရုပ်သံ) click
Ko Min said...
ဒီကနေ့ မနက်စောစောစီးစီး ရန်ကုန်က နာမည်ကြီုးမီဒီယာတိုက် တစ်ခုက စိတ်ပျက်စရာ မိမိကိုယ်ကိုယ်ကို မီဒီယာသမားလို့ ခံယူထားသူ တစ်ယောက်ရဲ့ ပြောစကားကို ကြားခဲ့ရတယ်….
ဖြစ်ပုံကဒီလိုဗျ….. ပြောနေတဲ့နေရာက လူအများထိုင်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် (အဲဒိ မီဒီယာတိုက်ကဘဲ ဖွင့်ထားတာ) လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်ကပေါ့ မြန်မာ့လေကြောင်းပိုင် ဖော်ကာလေယာဉ် တစ်စဉ်းကို အများပြည်သူတွေ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်အောင်လို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာပြသထားဖို့ စည်ပင်သာယာကို လှူဒါန်း ခဲ့ပါတယ်….
ဒီအကြောင်းကို အဲဒိမီဒီယာသမားက မြန်မာ့လေကြောင်းမှာ သွားရောက် သတင်းယူခဲ့ပါတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်… အဲဒိမီဒီယာသမားကဆက်ပြောရာမှာ သတင်းဆောင်းပါးကို ဂျာနယ်ထဲ မထည့်ခင် သက်ဆိုင်ရာဌါန ဖြစ်သော မြန်မာ့လေကြောင်းမှ တာဝန်ရှိသူထံ လာရောက်ပြသရန် မှာလိုက်တယ် လို့ သူကပြောပါတယ်…
ဒါပေမယ့်.. ဆောင်းပါးပြီးတဲ့အချိန်ကတော့ ဂျာနယ်တိုက်က ဖောင်ပိတ်ခါနီးလို့ရယ်..ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်နေလိုရယ်.. နောက်တစ်ရက်ကြတော့ မအူပင်မှာ သတင်းသွားယူရလို့ရယ်နဲ့ မြန်မာ့လေကြောင်းမှ တာဝန်ရှိသူထံ သွားမပြ ဖြစ် ပဲ သတင်းဆောင်းပါးက ဂျာနယ်ထဲပါသွားပါတယ်…
နောက်တစ်နေမှ ဂျာနယ်လေး ၂စောင် ၃စောင်ကိုင်ပြီး မြန်မာ့လေကြောင်းမှ တာဝန်ရှိသူထံ သွားပြတော့ သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိက လာရောက်ပြသရန် မှာလိုက်တာကို ဘာလို့လာရောက်မပြသတာလဲလို့ပြောတော့ ခုနကလို စဉ်ချေတွေပေးလိုက်တာကို အရာရှိက သိပ်ဘ၀င်မကျဘူး.. ဒါပေမယ့် ဘာမှတော့ မပြောလိုက်ပါဘူး တဲ့.. ဂျာနယ်လေး ၂စောင် ၃စောင်ပေးပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့….
ဒီအထိ ပြသနာ မဟုတ်သေးဘူး.. သူကဆက်ပြောတာက ဘာမှအရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စကို လာရစ်နေတယ်ပေါ့.. သူကတော့ဘာမှအရေးမဆိုက်ပါဘူး.. ဒါလားဂျာနယ်လစ်…. ဒါဆိုရင်လည်း ဘာမှအရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စကို ဘာလို့ သူများအချိန်ကို သွားဖြုန်းသေးလဲ… ဌါနဆိုင်ရာတိုင်းမှာရော.. ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အင်ဆာဗျူးတွေမှာပါ.. သတင်းဆောင်းပါတွေပြီးသွားရင် သက်ဆိုင်သူကို ပြန်လည်ပြသပြီး အတည်ပြူချက် ယူရတာ ထုံးဆံပါ…
ဒီလို ဂျာနယ်လစ်တွေ ဘယ်လောက်တောင်များနေလည်း မသိပါဘူး…. ပြောရင်တော့ ဂျာနယ်လစ် အခွင့်အရေးဆိုတာ ကို ပါးစပ်ကမချတန်း ပြေနေကြတယ်…ဂျာနယ်လစ်ရဲ့ တာဝန်နဲ့ ပါးစပ် ဆောင့်ထိန်းမှုကို တော့ ဘာမှ မသိဘဲ.. နေရာတကာ လျှောက်ပြေနေတယ်… သြော် ဂျာနယ်လစ်ကြီးရယ် ကြည့်လည်း လုပ်ပါအုံး…….
တာဝန်သိမှု ၊တာဝန်ခံမှု၊တာဝန်ယူမှု နဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားသိတက်မှု စိတ်ဓါတ်တွေးမွေမြူဖို့ လိုပါတယ်
The practice called due to respect had been lost in our country since 1988.